O Camiño dos Faros de Galicia na ọkwa asatọ II | Akụkọ Njem
O Camiño dos Faros de Galicia na ọkwa asatọ II
Anyị ahụworị ụzọ atọ mbụ nke O Camiño dos Lighthouses, njem pụrụ iche nke ụsọ oké osimiri Galician na-ebute anyị site na ihe a maara dị ka Costa da Morte. Anyị si Malpica dị n’ụsọ oké osimiri wee gaa Laxe n’usoro atọ ndị a, ma a ka nwere usoro ise ọzọ ịchọpụta.
Dịka anyị kwuworo, enwere ike ịme nnukwu ụzọ njem a n'ụzọ dị iche iche, na-ebu ụzọ họrọ nke kacha mkpụmkpụ ma ọ bụ nke kachasị mfe, ma ọ bụ họrọ dịka mmasị anyị nwere na mpaghara ọ bụla, ebe ọ bụ na e nwere site na mgbe ochie na-anọgide na ụlọ ọkụ, oke osimiri na ụdị nkwupụta niile na ọkwa nke ọ bụla. Onye ọ bụla nweere onwe ya ịhọrọ usoro na ụzọ isi nwee ọ enjoyụ na Camiño dos Faros.
1 Oge nke 4: Laxe-Arou na kilomita 17,7
2 Oge nke 5: Arou-Camariñas na kilomita 22,7
3 Oge nke 6: Camariñas-Muxía na kilomita 32
4 Oge nke 7: Muxía-Nemiña na kilomita 24,3
5 Oge nke 8: Nemiña-Cabo Finisterre na kilomita 26,2
Oge nke 4: Laxe-Arou na kilomita 17,7
Nke a bụ ọkwa kachasị dị mkpirikpi niile, yabụ, ọ bụ ezie na ọ bụ ọkwa nke anọ maka ndị chọrọ ịgbaso usoro, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ọkwa kachasị mma maka ndị chọrọ ịmalite n'okporo ụzọ a ma enweghị ọtụtụ ahụmịhe. N'oge a ị hapụ ọdụ ụgbọ mmiri nke Laxe, gafere na chọọchị Santa María da Atalaia wee rute Laxe Lighthouse, ebe mara ezigbo mma nke nwere ugwu dị elu ebe ebili mmiri ahụ na-ada.
Anyị na-aga n'ihu iru otu ebe pụrụ iche, Praia dos Cristais ma ọ bụ ụsọ mmiri nke kristal, nke a na-akpọ n'ihi na o jupụtara na kristal ndị nwere ọnụ na-enweghị atụ nke oke osimiri ahụ. Gafere osimiri mara mma nke Soesto wee banye n'ụsọ osimiri na ọdọ mmiri Traba. N'oge nke rutere na obodo camelle Nwere ike ịhụ ụdị azụ azụ n'ụsọ oké osimiri a jupụtara na akụkọ ụgbọ mmiri, na nso nso bụ Museum of Man, ihe ngosi nka nke onye German biara na ụsọ mmiri Camelle, ebe ọ nọrọ biri wee malite ịmepụta ọrụ ya. Kemgbe ọ nwụrụ, ụlọ ihe ngosi nka nke mepere emepe emebiwo ma ọ bụ ya mere ha ji kee Museo de la Casa del Alemán, ebe ha na-anakọta ọtụtụ ọrụ ya. Finally mechara rute n’obodo nta dị na Arou, njedebe nke ogbo a, ebe e nwere osimiri mara mma, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọtụtụ ọrụ.
Oge nke 5: Arou-Camariñas na kilomita 22,7
N'oge a, anyị na-ahụ mbara ala dị larịị ma sie ike karịa nke gara aga. Leave hapụ Arou wee rute n'ụsọ osimiri Lobeiras, bụ naanị ebe ị nwere ike ịhụ ụgbọ ole na ole na ụlọ ndị ọkụ azụ. Mpaghara oke osimiri jupụtara na ya ebe enwere ọtụtụ ụgbọ mmiri nke gbadara n'akụkọ ihe mere eme. Gafere site n'ọdụ ụgbọ mmiri Santa Mariña kwupụta osimiri nke Trece, ebe Ebe a na-eli ozu Bekee. Emepụtara ebe a na-eli ozu a n'ihi ọtụtụ ọdachi ụgbọ mmiri dakwasịrị n'ụsọ mmiri a, ụgbọ mmiri kpughere na ntinye nke Vilán Lighthouse iji nye nchekwa dị ukwuu n'akụkụ mpaghara a. Nke a bụ ụlọ ọkụ eletrik mbụ na Spain, ọ dịkwa na mpaghara mara mma. Tupu ị bịarute Camariñas, gaa na Ermita da Virxe do Monte. Na Camariñas, ị ga-akwụsịrịrị ịnụ ụtọ ihe atụ ha, nka nka nke amaala ụwa.
Oge nke 6: Camariñas-Muxía na kilomita 32
Nke a bụ usoro kachasị ogologo, mana ebe ọ na-enweghị oke ugwu, ọ dị mfe, a na-agakwa obodo abụọ kachasị mkpa na mpaghara ahụ, Camariñas na Muxía. Na ụzọ ị ga - ahụ ọtụtụ ụsọ osimiri, dịka Area Grande, Espiñeirido ma ọ bụ Leis. Na nke a nke njegharị anyị ga-ahụ Nsoro nke Black River Mills. Ọ bụ obere na ụzọ echekwara nke ọma na ọtụtụ igwe igwe ochie nke eweghachitere. Emechaa ị nwere ike ịga leta ebe obibi ndị mọnk nke Moraime, nke malitere na narị afọ nke iri na abụọ. Finally ga-emecha rute otu n’ime ebe kachasị maa atụ, ụlọ ọkụ Muxía na ebe obibi ndị mọnk nke Virxe da Barca, bụ ebe njem njem ama ama.
Oge nke 7: Muxía-Nemiña na kilomita 24,3
Nke a bụ otu ụzọ esiri sie ike kachasị nso nke enwere ike ịchọta ya niile, mana iji ndidi enwere ike ịme ya iji nwee ọmarịcha ọdịdị. Hapụ Muxía anyị banye n'ụsọ osimiri mara mma nke Lourido ma site ebe ahụ anyị gbagoo Ugwu Cachelmo. Ga-agbago Ugwu Pedrouzo, mana na nloghachi ị ga-enwe ọmarịcha echiche nke oke osimiri. Otu isi ihe masịrị usoro a bụ Houselọ ọkụ Touriñán, na-eleta nke ukwuu maka ọdịda anyanwụ pụrụ iche na nke ịbụ isi ebe ọdịda anyanwụ nke ala Spain. Na mgbakwunye, site na Machị 22 ruo Eprel 25, anwụ ikpeazụ na kọntinent Europe na-ada ebe a. Akụkụ a kwụsịrị na osimiri Nemiña na ọdụ mmiri Lires.
Oge nke 8: Nemiña-Cabo Finisterre na kilomita 26,2
Anyị rutere n’agba nke ikpeazụ, nke malitere na osimiri Nemiña wee kwụsị na Cape Finisterre, ebe ndị Rome chere na ụwa na-agwụ. N'oge a ị nwere ike ịnụ ụtọ ọnụ ọnụ ugwu na ụsọ mmiri dị iche iche, dịka Lires ma ọ bụ Mar de Fora. Na Punta Castelo ị nwere ike ịnụ ụtọ Casto de Castromiñán, nke malitere n'oge Iron Age. Mgbe ị rịgoro na Monte do Facho ị ga-emecha rute Cape Fisterra, njedebe nke ụzọ a mara mma nke jupụtara na ọkụ ọkụ na ụsọ mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » O Camiño dos Faros de Galicia na ọkwa asatọ II
Sigüenza, site na obodo nke doncel gaa ebe kachasị mma ime obodo 2017
Ememe ihunanya ezumike na Paris